IIPATENI ZETHAYILE KUNYE NOBEKO - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi Iipateni zethayile kunye nobeko
Iipateni zethayile kunye nobeko
Wamkelekile kwisikhokelo sethu kwiipateni zethayile ezithandwayo kunye nokubekwa kubandakanya imibono yezinto ezahlukeneyo zangaphakathi nangaphandle zoyilo. Iithayile zinokubekwa kwiindawo ezininzi, kwaye kwinani elikhulu nangakumbi okanye iipateni, imibala, kunye nezitayile. Xa ucwangcisa iprojekthi yokulungisa iithayile uyilo kunye nolwakhiwo kunokuba nefuthe elikhulu kukuziva kwesithuba.
Apha ngezantsi sabelana ngezinye zeepateni zethayile ezithandwayo kunye nolwakhiwo ukukunceda ukhethe olululo kuyilo lwakho olulandelayo. Ukufunda ngakumbi malunga iimilo zethayile ndwendwela apha.
Ukufakwa kwangaphambi kweTile
Ipateni eQhelekileyo yokuLala (okanye iStack Bond)
Iphetshana elibekiweyo leDiagonal (okanye kwi-On-Point)
Ipateni yeZitena (okanye iBond Running, Offset)
Umzekelo weHringbone Tile (okanye iZig Zag)
Umzekelo wethayile ye-DRM
Umzekelo weBhasikithi yokuLuka
I-Versailles Pattern (okanye isiFrentshi)
Ipateni yeethayile yePinwheel (iHopscotch)
Imigca yeeTayile eziManyeneyo
Imida kunye neListellos
Iimo zeTayile ezingaqhelekanga kunye nobukhulu
Ngaphambi kofakelo lweetayile kuya kufuneka uthenge iithayile. Xa usenza oko, ukujonga amanani ebhetshi kuya kubaluleka ukunqanda umbala okanye ubungakanani umahluko. Oku kuyinyani ngakumbi xa kuthengwa iithayile kwiivenkile ezinkulu zebhokisi apho zihlala zininzi ngemveliso kwaye xa zisebenzisa umbala oqinileyo. Ngaphambi kokuba uthathe iibhokisi zethayile ekhaya, skena iibhokisi ukuze uqiniseke ukuba unenombolo yeedayi.
Ngale nto ithethileyo licebo elilungileyo ukuthenga iithayile zakho kwivenkile enye. Njengoko kukhankanyiwe iintlobo ezininzi zethayile zinokwahluka kakhulu phakathi kweebhetshi. Ngamanye amaxesha umahluko wombala ucace gca kwaye awunakuwuqaphela de kube ithayile iphantsi kwezibane ezahlukeneyo.
Enye into ekufuneka uyiqwalasele ngakumbi xa uthenga kwiivenkile ezinkulu zebhokisi yezixhobo zeziphene kwithayile. Jonga iibhokisi ozifumanayo kwimizuzwana yefektri, iichips, umonakalo okanye iithayile ezingalinganiyo ngaphambi kokuba uqale ufakelo. Ikwangumbono olungileyo ukuthenga iibhokisi zethayile ezingavulwanga xa kunokwenzeka ukunqanda iingxaki ezongezelelweyo.
Ukuthenga ngaphezulu kweepesenti ezingama-20 ukuya kuma-30% ngaphezulu kunokuba ufuna kuya kukunceda ukunqande ukuthenga iithayile ezongezelelweyo kamva. Qiniseka nje ukuba ivenkile inomgaqo-nkqubo wokubuyisa ovumayo ukuze ungabambeki kwizongezo ekugqityweni kweprojekthi.
Ukuba ufaka iithayile ngokwakho kuluncedo ukwazi ukuba ezinye iintlobo kunzima ngakumbi ukuzifaka kunezinye. Ilitye lendalo, iglasi kunye neethayile ezinkulu (i-18 ″ x18 ″ okanye i-6 ″ x 24 to umzekelo) kunzima ukuzifaka kune-ceramic rhoqo, i-porcelain okanye iintlobo eziqhelekileyo i-subway tile backsplash .
Xa ulungiselela ukufaka iithayile, uya kufuna ukubeka ipateni ngaphambi kwako nakuphi na ukubekwa ngokusisigxina. Kulapho uya kuthi ufumanise ukuba zeziphi izinto oza kuzicutha kunye nokuba zingaphi kwaye zinkulu kangakanani imigca ye-grout.
Ipateni echanekileyo yokubeka iya kuba yenye yeepateni ezilula umntu anokuzikhetha. Oku kuyenza ibe yinto eqhelekileyo, ngakumbi ukuba uya kube uyigqibezela ngokwakho iprojekthi okanye umtsha kwilizwe leethayile.
Ukubeka ngokuthe ngqo kukwabhekiswa njenge-bond bond. La magama ayacaca ngokucacileyo xa ubona ipateni ngokwayo ngenxa yamaqhekeza abekwe ngokuthe ngqo ecaleni komnye kwaye abekwa ngaphezulu ukwenza iphethini elula, engaphazamisiyo. Le patheni isetyenziswa rhoqo kwiindawo onganqweneli ukuba yindawo ephambili.
Ipateni ebekwe ngokuDiagonal ikwabizwa ngokuba yipateni yeHarlequin iyafana nephethini echanekileyo ethe yaxoxwa ngaphambili kodwa ngokudityaniswa kwama-45 degrees.
Oku kuyakwenza ukuba iziqwenga zesikwere zisetyenziswe zibukeke ngakumbi njengedayimani kuba ziya kuba kwindawo yesikwere. Le patheni nayo ilula kwaye iya kuba linyathelo elilandelayo lokuba uyenze ngokwakho kwaye ayizukuthatha kwindawo exakekileyo. Ubeko oludibeneyo luya kunika nendawo encinci inkohliso yokuba inkulu.
Umzekelo wezitena uza kudala ukubonwa ngokufana nodonga lwezitena olwenziwa ngamatye. Oku kuya kuthetha ukuba iziqwenga zimiliselwe ecaleni kwelinye ngokuthe tye.
isangqa kumnwe wokukhala wasekunene
Xa zibekwe ngokuthe nkqo, iziqwenga ziya kuba ziindawo ezingqinelanayo neziko leebhloko ngaphantsi nangaphezulu kwalo.
Isidingo sokugqibelela asikho kangako kwipateni yezitena ngenxa yokuba kukho imigca ethe nkqo, ke iliso aliyi kubamba mpazamo zincinci.
Umzekelo wesherringbone uye waba ngumzekelo ohamba phambili. Iya kuba ngumzekelo ocel'umngeni wokuzenzela ngokwakho, kodwa kungenzeki.
Ukufezekisa imbonakalo yeherringbone kuyakufuneka ubeke ikholamu yeziqwenga ethambise iidigri ezingama-45 ukusuka phezulu kuye ezantsi. Emva koko fakela loo kholamu ecaleni kwayo. Oku kuyakwenza imilo ye-v kunye nepateni entle. Kuxhomekeka kwimibala ekhethiweyo inokuthi ivele njengendawo ekugxilwe kuyo okanye idityaniswe nendawo eyijikelezileyo.
Umzekelo we-chevron lolunye ujongo oluqhelekileyo oluya kongeza intshukumo kwaye lujolise kwisithuba. Le patheni iya kubiza iziqwenga ezisikiweyo ngokukodwa ukuze zilingane kwiimilo ze-chevron eziya kuthi zinike ipateni itolo ekhangelekayo.
Rhoqo ukwenza inkqubo yokufaka ibe lula iithayile ziya kuza nomnatha emva okanye iipateni ezahlukeneyo onokuzibeka. Ezi zinokusetyenziswa ngombala owodwa, kodwa zihlala zisetyenziswa ngokutshintsha imibala kwipateni enomdla.
Umzekelo webhasikithi yokuluka lolunye ujongo ekulula ukufezekiswa kodwa kujongeka ngathi kunzima. Kuba eneneni ukwaluka ayisiyiyo inketho yokukhohlisa kwenziwa endaweni yezikwere ezininzi ezenziwe ngoxande olude oluninzi.
Iseti nganye ziindawo ezihamba ngokuthe tye kwaye ngokuthe nkqo ukujonga ukuluka ngaphezulu nangaphantsi komnye nomnye. Ngobume obahlukeneyo, le patheni iya kukhula kwiindawo ezincinci, iindawo ezinkulu zinokuphulukana nesinye isiphumo.
Ipateni yeheksagon yenye yeepateni eziye zahamba kakuhle kumaxesha akutshanje, ukubona ngakumbi nangakumbi kusetyenziswa kwizithuba. Ezi tile ziyakwenziwa okweehekton kwaye zibekwe emaphethelweni ukwenza ukubonwa kwemosisi.
Ngokwesiqhelo xa ubeka iziqwenga uya kufumana eyona ndawo iphakathi kwaye uya kugcwalisa ukusuka apho. Ipatheni yeheksagon inokuba nzima ngokuthambileyo kwiithayile ezintsha ngenxa yokuqalisa kumbindi wenxalenye, kodwa ngokusisiseko kuya kubakho iihexagons ezibekwa ukusuka phezulu kuye ezantsi kwaye ngokuthe tye ziya kubekwa embindini wamaqhekeza ngapha nangapha.
Iphethini ye-chessboard iya kubuyela kwi-diagonal lay okanye i-straight lay in the sense of pattern. Ukwenza iphethini ye-chessboard ibe yodwa kwaye iyinyani kwigama layo, iya kuba nemibala emibini eyahlukeneyo, ebekwe kwipateni yokutshintsha.
Oku kudala ukubonakala okufanayo kwibhodi yechess. Ngelixa ukubeka ngokuthe tye kunye nokubeka i-diagonal kuqhelekile iipateni ezilula, ukongeza imibala etshintshanayo kuya kudala ukubonwa okungaphezulu, yiyo loo nto ebangela ukuba ipateni ibe yinxalenye yesithuba. Ukucima le nto kungcono ungadibanisi nantoni na ngaphezulu kwindawo enye.
Iphethini yeVersailles yipatheni eyahlukileyo kakhulu onokukhetha kuyo. Ikwayenye yeepateni ezinzima ukwenza, ngakumbi zenzele ngokwakho.
Le patheni yenziwa ngokusebenzisa ubungakanani beethayile ezahlukeneyo, ezifuna ukucwangciswa okubanzi. Obu bungakanani obahlukeneyo kunye nolwakhiwo luya kudala ukubonakala okungahleliwe. Oku kuyakuba yindawo ephambili egxile kwigumbi ukuze kungabikho kwanto ekhazimlayo kufuneka ibe yindawo kwindawo enye.
Iphethini yepinwheel yenye yeepateni ezinzima ukuyifaka kwaye kufanele ukuba ishiywe kwiingcali.
Ithayile enkulu yesikwere iya kubekwa idiagonally, emva koko ezine iithayile zesikwere ziya kubekwa kufutshane neekona, ziphinda ipateni kuyo yonke. Oku kunokubangela ukuba umgangatho ophakame kakhulu, ngenxa yoko uqhele ukusetyenziswa kwimvula okanye kwimida yezithuba.
Umzekelo we-cobblestone uya kufana nomzekelo weherringbone. Oku kuyakuhambelana ngengqondo yokuba iqala ngokubeka iziqwenga zoxande kwi-angle ye-45 degree.
Ukusuka apho imiphetho iya kuba nezikwere ezincinci, ukusuka apho iyakuphinda. Oku kuhlala kusisitayile sendabuko ngakumbi kunokuba neendawo ngokufanelekileyo. Enye into enje yile patheni yaseDatshi yamatye akrwada aboniswe apha ngasentla.
Iphepha lephepha lewindmill
Iphethini ye-windmill ibandakanya isikwere esinye esincinci embindini, kunye namacala amane ajikelezileyo. Rhoqo le patheni inemibala eyahlukeneyo yokubonelela ngendawo egxile kakhulu kwimida, izindlu zangasese nakwezinye iindawo ezincinci.
izitulo ezimbini zokutyela
Olu iya kuba kukufakwa apho umntu kufuneka afune uncedo lobuchwephesha ngaphandle kokuba uyenze ngokwakho-unamava amakhulu kufakelo lweetayile.
Yolula iipateni zebhondi
Ipateni yebhondi eyoluliweyo iya kufana nephethini yezitena. Oku kuyakubandakanya iithayile ezisisikwere okanye eziziingxande eziza kuba ziindawo ecaleni ngokuthe nkqo ngokuthe nkqo embindini wamaqhekeza angentla nangaphantsi kwawo.
Ipateni yebhanti yesiNgesi
Kwibhondi yesiNgesi unokufumana nje ipateni yesiNgesi yesiqhelo okanye ibhondi yesiNgesi. Ezi zimbini ziya kuba ziipateni ezifanayo.
Isibophelelo sesiNgesi siza kuqala ngeziqwenga zoxande ecaleni kwelinye ngokuthe tye. Imiqolo engentla nangaphantsi iya kulandelelana ngokulingana neziqwenga zesikwere. Ezi ziya kuphinda. Umahluko kuphela kwibhanti yesiNgesi enqamlezileyo iya kuba ziithayile zoxande eziza kugxadazeliswa ngokufana nestretcher bond.
Imigca yethayile emodyuli iya kwenza iipateni zejometri ezinomdla. Oku kungenxa yeemilo ezahlukeneyo kunye nobukhulu ezinokuthi iithayile zingene kuzo. Zinokubekwa kwinani lendibaniselwano yokwenza iipateni ezinomdla okanye ezilula.
Olunye ukhetho ngamaxande, trapezoids, hexagoni, yobusi, iidayimane, njl Ke ukusebenzisa imibala kunokukhuthaza ngokupheleleyo nasiphi na isithuba.
Ukongeza iithayile ezinepateni kunokwenza ufakelo olulula kunye nephethini entsonkothileyo. Oku kunokongeza ukugqiba okuhle ngelixa kufuneka usebenzise ipateni elula yegridi.
Iifayile ziindlela ezintle zokongeza inzala kumgangatho. Nokuba yinto encinci okanye enkulu, banokunceda ukubopha igumbi kunye.
Oku kunokuba yindlela efanelekileyo yokusebenzisa iintsalela ezongezelelweyo ezivela kwinxalenye eyahlukileyo yeprojekthi. Ezi zihlala zihlala zilungelelanisa imibala kunye neepateni kunye nezinye izinto kwisithuba.
Ukongeza umda okanye i-listello kunokunceda ukongeza indawo ekugxilwe kuyo okanye ukugxila kufakelo. Oku kunokunceda ukukhokelela abantu kwisithuba okanye ubonise apho ujolise khona.
Ezi zihlala zinemibala eyahlukileyo kunye neepateni ukongeza umahluko omncinci ngakumbi kumgangatho waphantsi okanye kugqunywe ngodonga.
Iimilo zethayile engaqhelekanga kunye nobukhulu
Kukho iintlobo ngeentlobo zeemilo, ubungakanani kunye noyilo xa kufikwa kwiithayile. Oku kuyakwenza indawo eyahlukileyo kwabo bafuna ukongeza uphawu lwabo kuyilo lwabo.
Ezi ziya kufuna ukucwangciswa ngenxa yeemilo ezahlukeneyo. Ezi zibonelelwa ngemibala eyahlukeneyo enkulu kunye ne-glazing kunye nokwenza ukhetho olungenamda.
Ubume beethayile ezingaqhelekanga zibandakanya ii-mosaic, uxande oluxande, iscalloped, ilitye, i-3d cubed till nayo nayiphi na enye ithayile eyenziweyo.
Iithayile zangasese ezinemilinganiselo emithathu
Umlambo werayile yeshawa
Ipateni yodongwe ethandwayo
Zithini iipateni zethayile ozithandayo kunye nolungiselelo? Sazise kwizimvo kwaye nceda undwendwele ikhitshi lethu Uyilo olubuyela umva iphepha lezimvo ezinje.
Isilayi yeTayile yeNtsika yeJava esisikiweyo 1 sq.ft. (Mesh Mou… $ 11.49 umthengisi ogqibelele (9) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Umqhubi wenqwelo moya $ 2.99 umthengisi ogqibelele (481) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
I-wall26-Grunge Red Brick Wall Backgrou… $ 109.99 umthengisi ogqibelele (138) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Gcwalisa i-2 'X 8' yeWhite Subway Tile Gloss 2 'X 8' (60 p… $ 59.88 umthengisi ogqibelele (54) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA Iintengiso zeAmazon
jovani umama womolokazana unxiba
www theknot com ukufumana isibini
iikhabhathi zekhitshi zekhitshi
ozimase isidlo sangokuhlwa sokuziqhelanisa nomtshato
Ileta eya kunyana ngosuku lomtshato